भजनसंग्रह 42 ERV-NE;NIV - दोस्रो भाग - Bible Gateway
भजनसंग्रह 41भजनसंग्रह 43
भजनसंग्रह 42 Nepali Bible: Easy-to-Read Version (ERV-NE)
प्रमुख संगीतकारलाई: कोरह परिवारबाट मस्किल नाउँको भजन।
42 हे परमप्रभु, जसरि एउटा हरिण खोलाको पानी पिउन तिर्खाएको हुन्छ।
त्यसरी नै मेरो आत्मा तपाईंको लागि तिर्खाएको हुन्छ, परमप्रभु।
2 मेरो प्राण जीवित परमेश्वरको लागि तिर्खाउँछ।
म उहाँलाई भेट्न कहिले जान सक्छु?
3 मेरो शत्रुले निरन्तर मलाई ठट्यौली बनाएको छ।
ऊ भन्छ, “तेरो परमेश्वर कहाँ छ? ऊ तिमीलाई बचाउन आउँछ?” म, उदास र दुःखी भएँ।
आँसु मेरो रात दिनको खाद्य बनिएको छ जो मेरो आँखाबाट झर्छ।
4 जब म मन्दिरमा बिताएका सुन्दर क्षणहरू सम्झने गर्छु
मेरो हृदय चर्किएर आउँछ।
तिनीहरू सबैलाई भीड-भाडबाट छिराउँदै परमेश्वरको मन्दिरतिर लगेको सम्झन्छु।
ती घुइँचोहरूमा मनाइरहेका उत्सवहरूमा स्तुति-गान खुशीसँग गाएको सम्झन्छु।
5-6 म यति उदास किन हुनु पर्ने?
म किन यति साह्रो विचलित हुने!
म परमप्रभुको सहयोगको निम्ति पर्खन्छु।
फेरि मैले उहाँको प्रशंसा गर्ने मौका पाउनेछु।
उहाँले मलाई बचाउनु हुन्छ!
किनभने मैले यस ठाउँबाट तपाईंलाई सम्झना गर्नुपर्छ,
यस सानो पहाड जहाँ हेर्मोन पर्वत र यर्दन नदीको मिलन हुँदछ।
7 पृथ्वीको मुहानबाट निस्केर छङ्ग-छङ्ग गर्दै
खोला बगेको आवाज म सुन्छु।
हे परमप्रभु, तपाईंका छालहरूले,
मेरो वरिपरि छङ्ग-छङ्ग गर्दै मलाई धोइरहेका छन्।
8 प्रत्येक दिन परमप्रभुले आफ्नो स्नेहपूर्ण करूणा देखाउनु हुन्छ
अनि प्रत्येक रात म प्रशंसा मेरो जीवित परमेश्वरका लागि प्रार्थना गर्ने थिएँ।
9 म परमेश्वर, मेरो चट्टानसँग कुरा गर्छु म भन्छु,
“हे परमप्रभु, किन तपाईंले मलाई बिर्सनु भयो?
शत्रुको क्रूरताको कारणले गर्दा?
त्यस्तो उदासीनता मैले किन खप्नु?”
10 मेरा शत्रुले लगातार मेरो अपमान गर्दछ र मार्ने तरिकाले प्रहार गर्दछन्,
अनि मलाई सोध्दछन्, “तेरो परमेश्वर कहाँ छन्?
के तँलाई बचाउन अहिलेसम्म आएको छैन?”
11 मैले यति उदास किन हुन पर्छ?
किन मैले यति विरक्तिनु पर्छ?
मैले परमेश्वरको सहायताको निम्ति अपेक्षा गर्नु पर्छ।
म फेरि उहाँको प्रशंसा गर्ने मौका अझै पाउनेछु।
उहाँले मेरो रक्षा गर्नु हुनेछ!